विज्ञान, बाइबल र मुक्तिदाता Archives - Page2of2- Word of Truth, Nepal
February 5, 2020 /in विज्ञान, बाइबल र मुक्तिदाता /by Pradesh Shrestha
चाबी प्रश्न—उत्पत्ति १:१ र १:२ को बीचमा अन्तराल (GAP) छ?
चाबी वाक्यांश—“आकारबिनाको र शून्य” (उत्पत्ति १:२)
“शुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अनि पृथ्वी आकारबिनाको र शून्य थियो; अनि गहिरा सागरको सतहमाथि अन्धकार थियो। अनि परमेश्वरका आत्मा पानीको सतहमाथि घुम्नुहुन्थ्यो” (उत्पत्ति १:१-२)।
१) कतिको धारणाअनुसार, तल चित्रमा देखाइएझैं उत्पत्ति १:१ र १:२ को बीचमा एउटा ग्याप अर्थात् समयको अन्तराल हुनुपर्छ।
उनीहरूको विश्वासमा उक्त अन्तराल करोडौं वा अरबौं वर्ष लामो थियो जुन अवधिभित्र केही महत्वपूर्ण घटनाहरू घटे।
२) अन्तरालको सिद्धान्त (Gap Theory) का कतिपय समर्थकहरूको विश्वास अनुसार उक्त समयावधिमा, आदमको सृष्टि हुनुभन्दा पनि अगाडि, एक मनुष्य जाति (कुनै प्रकारको “पूर्व-ऐतिहासिक मानवहरू”) पृथ्वीमा जिउँदथे! आदम सृष्टि-साताको कुन दिनसम्म सृष्टि गरिएका थिएनन् (उत्पत्ति १:२६-३२)? ________________ यसको अर्थ यो हुन्छ कि यदि यस अन्तरालको समयमा पृथ्वीमा कुनै मानिसहरू जिएका भए, तिनीहरू आदमभन्दा अगाडी बाँचेको हुनुपर्छ!
यी “पूर्व-आदम” मानिसहरूलाई के भयो? तिनीहरू परमेश्वरको विश्वव्यापी इन्साफमा मारिए भनी मानिसहरूले हामीलाई बताउँछन्। कतिले त यो पनि भन्छन् कि तिनीहरूको शरीर नष्ट भए, तर ती दुष्ट मानिसहरूका आत्मा रहिरह्यो र तिनीहरूका आत्मा नै आजका दुष्ट आत्माहरू हुन्!
के यो नै दुष्ट आत्माहरूको सुरुवातको ठीक परिभाषा हो त? के दुष्ट आत्माहरू साँच्चै आदमभन्दा पहिले बाँचेका मानिसजातिको आत्माहरू हुन् त? (वास्तवमा दुष्टआत्माहरू परमेश्वरको विरोध गरेर शैतानलाई पछ्याउने पतित स्वर्गदूतहरू हुन्।)
३) उक्त अन्तराल (GAP) मा संसारमा किन त्यस्तो भयानक इन्साफ भएको थियो? लुसिफरको पापले नै उक्त इन्साफ आएको भनी अन्तराल (GAP) मा विश्वास गर्नेहरूले दावी गर्छन् जसको फलस्वरूप पृथ्वी आकारबिनाको र शून्य हुनगयो (“became”) भन्ने अर्थ उनीहरू लगाउँछन्।
लुसिफरको सृष्टि कहिले भएको थियो? लुसिफर कहिले पापमा फसेका थिए? परमेश्वरले कहिले शैतानको इन्साफ गर्नुभयो? (यसको अध्ययन हामी यही पाठमा गर्नेछौं।)
४) लुसिफरको पापको कारणले परमेश्वरले संसारको इन्साफ गर्नुभयो भनी उनीहरूले बताउँछन्। यो कस्तो किसिमको इन्साफ थियो? अन्तराल (GAP) मा विश्वास गर्नेहरूले उक्त इन्साफ विश्वव्यापी जलप्रलयद्वारा भएको विश्वास गर्छन्। यो नूहको जलप्रलय थिएन किनभने उत्पत्ति ६-८ अध्यायसम्म उक्त जलप्रलयको कुरा गरिएको छैन। उनीहरूको बिचारमा यो पहिले नै भएको जलप्रलय हो जसलाई उनीहरूमध्ये कसै-कसैले “लुसिफरको जलप्रलय” भनी नाम दिन्छन्। के साँच्चै त्यस्तो जलप्रलयको अस्तित्व थियो? के बाइबलले त्यस्तो जलप्रलयको बारेमा केही बताउँछ? के बाइबले दुई ओटा जलप्रलयको उल्लेख गर्छ?
५)उनीहरू भन्छन्, “लुसिफरको जलप्रलय” मा नष्ट भएका बनस्पतिहरू र प्राणी जगतको अचानक मृत्यु भयो र माटोमा पुरिएर ती जीवशेषहरूमा परिणत भए।
के उत्पत्ति १:१ र १:२ को अन्तराल (GAP) को समयमा साँच्चै वनस्पति र प्राणीहरू थिए? के जीवशेषहरू बनिनुको कारण साँच्चै यही हो? संसारमा मृत्यु पहिलो पल्ट कहिले पस्यो? [याद राख्नुहोस्, तेस्रो दिनसम्म वनस्पतिहरू सृष्टि गरिएका थिएनन् र पाचौं र छैठौं दिनसम्म जीवित प्राणीहरू सृष्टि गरिएका थिएनन्।]
६) अन्तराल (GAP) मा विश्वास गर्नेहरूले लुसिफरको पापको कारणले संसारमाथि आएको परमेश्वरको इन्साफको कारणले “पृथ्वी आकारबिनाको र शून्य” ( उत्पत्ति १:२) भयो भनी बताउँदछन्।
त्यसैले, परमेश्वरको इन्साफको कारणले पृथ्वी जीर्ण र भग्नावस्थाको (आकारबिनाको र शून्य) भयो भनी ती मानिसहरूले विश्वास गर्दछन्। तिनीहरू विश्वास गर्दछन् कि उत्पत्ति १:२ ले भग्नावशेषमा बदली भएको संसारको व्याख्या गर्दछ जुनचाहिँ तबउसो सिद्ध थिएन—पाप र इन्साफले बिग्रेको र बिनाश भएको पृथ्वी थियो।
यदि तपाईंसँग स्वादिष्ट पाकेको स्याउ छ भने (खोट र दाग नभएको!) र केही महिना पछि तपाईं आउनुभएर त्यहाँ कुहिएको, बिग्रेको, किरा लागेको अवस्थामा स्याउ भेट्टाउनुभयो भने, स्वभाविक रूपमा त्यो स्याउ एकसमय “सिद्ध” थियो भन्ने निश्कर्षमा तपाईं पुग्नुहुन्छ। केही महिनाको अन्तराल (GAP) मा केही भयो, र स्याउ बिग्रिएको र कुहिएको अवस्था भयो!/
अन्तराल (GAP) मा विश्वास गर्नेहरूले उत्पत्ति १:१ लाई सिद्ध पृथ्वीको रूपमा वर्णन गर्छन्। त्यसपछि अन्तराल (GAP) मा कुनै घटना घट्यो (लुसिफरको पतन र परमेश्वरको इन्साफ) र पथ्वी आकारबिनाको र शून्य भयो (उत्पत्ति १:२)।
तर, के उत्पत्ति १:२ ले साँच्चै बिग्रिन गएको पृथ्वीको वर्णन गर्छ? के पृथ्वी वास्तवमै त्यस समयमा बिग्रिन पुगेको हो? के त्यहाँ वास्तवमै त्यस्तो अन्तराल (GAP) थियो?
हामी सबैलाई थाह छ, मानिसको पापको फलस्वरूप पृथ्वी भ्रष्ट र खराब भएको हो (उत्पत्ति ३ पढ्नुहोस्), तर के उत्पत्ति १:१ र १:२ को अन्तरालमा पनि पृथ्वी नष्ट भएको हो त?
७) उत्पत्ति १:२ले बताउँछ, “अनि गहिरा सागरको सतहमाथि ______________ थियो”। अन्तरालमा विश्वास गर्नेहरूले उत्पत्ति १:२ मा भएको “अन्धकार” शब्दले पाप र इन्साफको वर्णन गर्दछ भनी भन्दछन्। कहिलेकाहिँ बाइबलले “अन्धकार” शब्दलाई पापपूर्ण अवस्थाको वर्णन गर्न प्रयोग गर्दछ। उदाहरणको निम्ति, यूहन्ना ३:१९-२० ले बताउँदछ कि मानिसहरूले ज्योतिलाई भन्दा बरू अन्धकारलाई प्रेम गरे (यी पदहरू पनि हेर्नुहोस्: यूहन्ना १:५; ८:१२; प्रेरित २६:१८; कलस्सी १:१३; १ पत्रूस २:९; १ यूहन्ना १:५-७; २:९-११)। हाम्रो पापको निम्ति ख्रीष्टको इन्साफ हुँदा के भएको थियो (मत्ती २७:४५)? __________________ के परमेश्वरले कहिलेकाहीँ अन्धकार पठाएर पनि संसारको न्याय गर्नुहुन्छ (प्रस्थान १०:२१-२३; प्रकाश ८:१२; १६:१० पढ्नुहोस्)? ________________ त्यसैले, उत्पत्ति १:२ मा भएको “अन्धकार”ले अन्तरालको समयमा परमेश्वरले संसारको इन्साफ गर्नुभयो भनी प्रमाणित गर्दछ भनी बताइने गरिन्छ। तर के यो साँच्चै सत्य हो? के “अन्धकार” शब्दलाई जहिल्यै पनि दुष्टताको चिन्हको रूपमा प्रयोग गरिएको छ? के सिद्ध पृथ्वीमा अन्धकार हुँदैन? के परमेश्वरले अन्धकारको सृष्टि गर्नुभएको हो?
८) मूल सृष्टिमा संसार सिद्ध थियो (उत्पत्ति १:१)। यदि अन्तरालको समयमा पृथ्वीको इन्साफ भएको र नष्ट भएको भए, परमेश्वरले सृष्टिको आफ्नो कार्यलाई फेरी दोहोर्याउनुपर्ने हुन्थ्यो! उहाँले आकाश र पृथ्वी दोस्रो पटक सृष्टि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो! त्यसो भए, उत्पत्ति १ का ६ दिनहरूले सृष्टिको नभएर “पुनर्सृष्टि” को बयान गर्छ। यी ६ दिनहरूमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीको पुनर्सृष्टि (पुन: बनाउने काम) गर्नुभयो। अन्तराल-इन्साफ (GAP-judgment) अगाडि, त्यहाँ वनस्पतिहरू, पशुहरू र मानिसहरू समेत पृथ्वीमा जिउने गरेका थिए। तर लुसिफरको इन्साफमा तिनीहरू सबै नाश भए, र परमेश्वरले पुन: एकचोटि जीवनको सृष्टि गर्नुपर्यो। त्यसैले उत्पत्ति १ अध्यायले परमेश्वरको मूल सृष्टिको वर्णन गर्दैन तर यसले परमेश्वरले गर्नुभएको आकाश र पृथ्वीको पुनर्सृष्टिको वर्णन गर्दछ भनी यी मानिसहरूले विश्वास गर्दछन्।
के साँच्चै त्यस्तै भएको हो त? उत्पत्ति १ अध्यायले सृष्टिको वर्णन गर्छ कि पुनर्सृष्टिको?
९) अन्तरालको सिद्धान्त (Gap Theory) मा विश्वास गर्नेहरूले पृथ्वी एकसमय पशुहरूले (डाइनासोर्सहरू सहित), वनस्पतिहरू र पूर्व-आदम मानिसहरूले समेत भरिएको थियो भनी बताउँछन्! तर यो पनि बताइन्छ कि लुसिफरको इन्साफले ती सबै नाश भए र पृथ्वी आकारबिनाको र शून्य भयो (उत्पत्ति १:२)। त्यसैले पृथ्वीलाई फेरी भर्नु खाचो पर्यो। पृथ्वी एकसमय (वनस्पतिहरू, पशुहरू र मानिसहरूले) भरिएको थियो, तर अब यो पुन: भरिनुपर्ने भयो। यही कारणले परमेश्वरले आदम र हव्वालाई उत्पत्ति १:२८ मा “भरिदेओ” भन्नुभएको आज्ञालाई उनीहरू “फेरि भरिदेओ” (“replenish”) भन्ने अर्थ लगाउँछन्। के साँच्चै “भरिदेओ” भन्ने शब्दले “फेरी भरिदेओ” भन्ने अर्थ लगाउँछ त (कि यसले साधारण अर्थमा भरिदेओ भन्ने नै अर्थ दिन्छ)? के उत्पत्ति १:३-३१ ले परमेश्वरले वास्तवमै पृथ्वीलाई दोस्रो पटक भर्ने आज्ञा दिनुभएको अर्थ दिन्छ त?
१०) के त्यहाँ साँच्चै उत्पत्ति १:१ र १:२ बिचमा अन्तराल छ? के परमेश्वरले हामीले पदहरूको बिचमा वा वाक्यहरूको बिचमा पनि अतिरिक्त लेख पढेको चाहनुहुन्छ? यदि त्यहाँ साँच्चै अन्तराल हुने हो भने, किन त्यहाँ उक्त अन्तरालको बारेमा र त्यस समयमा साँच्चै के भएको थियो भनी बताउने पदहरू छैनन् त?
अन्तरालको सिद्धान्त (GAP THEORY) का १० ओटा समस्याहरू
१. अन्तरालको समस्या
के उत्पत्ति १:१ र उत्पत्ति १:२ को बिचमा अरबौं वर्षहरूको अन्तराल छ त? प्रस्थान २०:११ पढ्नुहोस्। आकाश, पथ्वी र समुद्र अनि आकाशमा, पृथ्वीमा र समुद्रमा भएका सबै कुराहरू सृष्टि गर्न परमेश्वरलाई कति समय लाग्यो? __________________ के आकाश र पृथ्वीको सृष्टि (उत्पत्ति १:१) ६ दिनभित्रै भएको थियो? _________ उत्पत्ति १:१-१:३१ अनुसार सृष्टि गर्ने कार्य ६ दिनमा सम्पन्न भएको हो भने, १:१ र १:२ को बीचमा कसरी अरबौं वर्षको अन्तर हुन सक्छ?
“किनकि छ दिनमा परमप्रभुले आकाश, पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएका सबै थोकहरू बनाउनुभयो” (प्रस्थान २०:११)। त्यहाँ अन्तरालको निम्ति कुनै स्थान नै छैन! आकाश र पृथ्वीको सृष्टि ________ दिनमा (उत्पत्ति १:५ पढ्नुहोस्) भएको थियो। एक हप्तापछि सबैकुराहरू सृजना ______________ (उत्पत्ति २:१)।
२.आदमभन्दा अघि मानिस थिए भन्ने समस्या
के आदमभन्दा अघि साँच्चै त्यहाँ मानिसहरू थिए त? १ कोरिन्थी १५:४५ मा आदमलाई “___________ ____________” भनिएको छ। यदि आदम पहिलो मानिस हुन् भने, उनी भन्दा अघि त्यहाँ कुनै मानिस हुन सक्दैनन्!
बाइबलमा “मानिस” को पहिलो उल्लेख उत्पत्ति १:२६-२७ मा गरिएको छ। के यी पदहरूले मानिस भन्दा अघि पृथ्वीमा भएका मानिसहरूको सृष्टिको वर्णन गर्छ, कि आदम र हव्वाको सृष्टिको वर्णन गर्छ?
_______________________________________________________________ आदमअघि मानिस थिए भन्ने बाइबलले कतै उल्लेख गर्दैन। यदि वैज्ञानिकहरूले “पूर्व-ऐतिहासिक मानिस”का हड्डीहरू पत्ता लगाउने हो भने, उक्त मानिस आदमकै सन्तती हो भनी हामीले जान्न सक्छौं (यदि उनीहरूले बाँदर र चिम्पाङ्गजीको हड्डीलाई झुक्किएर मानिसको हड्डी हो भनेर सोचेनन् भने)! सबै मानिसहरू आदमबाट आएका हुन्। के आदम तपाईंको पूर्खा हुन्? ____________ लूका ३:२३-३८ पढ्नुहोस्।
दुष्ट आत्माहरू कहाँबाट आए? के दुष्ट आत्माहरू आदम सृष्टि गरिनुभन्दा अगाडि पृथ्वीमा भएका दुष्ट मानिसहरूका आत्माहरू हुन्? होइन, बाइबलअनुसार तिनीहरू शक्तिमान परमेश्व_रको विरुद्धमा उठेको शैतानको विद्रोहमा लागेका स्वर्गदूतहरू हुन्। जोडा मिलाउनुहोस्–
क) _____ पवित्र स्वर्गदूतहरू १) मत्ती ९:३४; मत्ती १२:२४
ख) _____ शैतानका दूतहरू २) २ पत्रुस २:४ र यहूदा ६
ग) _____ एक तिहाइ स्वर्गदूत शैतानलाई पछ्याउँछन् ३) मत्ती २५:३१
घ) _____ शैतान दुष्टआत्माहरूका शासक हुन् ४) प्रकाश १२:४
ङ) _____ स्वर्गदूतहरू जसले पाप गरे ५) मत्ती २५:४१; प्रकाश १२:७
३.लुसिफरको पतनको समस्या
लुसिफरको पतन कहिले भयो? कहिले लुसिफर दुष्ट बन्यो (परमेश्वरको विरोधी) र शैतान बन्यो? अन्तरालमा विश्वास गर्नेहरूले लुसिफरको पतन उत्पत्ति १:१ र १:२ को अन्तरालको बिचमा कतै भएको हो भनी बताउँदछन्। तर बाइबलले लुसिफर उत्पत्ति १:१ को अगाडि नै सृष्टि भएको र पापमा पतन भएको कुरालाई जनाउँदछ।
उत्पत्ति १:१ ले आकाशहरू र पृथ्वीको सृष्टिको वर्णन गर्दछ (यसको हिब्रू शब्द “आकाशहरू” मा बहुबाचक, -इम्को प्रयोग गरिएको छ र यसलाई “आकाशहरू” भनी अनुवाद गर्न सकिन्छ)।
बाइबलले ३ ओटा आकाशहरू (वा स्वर्गहरू) छन् भनी बताउँछ (२ कोरिन्थी १२:२ पढ्नुहोस्—“तेस्रो ___________ उठाइयो”):
१)पहिलो स्वर्ग (आकाश) दिनमा देख्न सकिन्छ, जहाँ चराहरू उड्छन् र बादलहरू रहन्छन्। यो वायुमण्डलीय स्वर्ग (आकाश) हो। येशूले मत्ती ६:२६मा भन्नुभयो, “__________ (स्वर्गका) _______________ हेर”। भजनसंग्रह ८:८ पनि पढ्नुहोस् (“आकाश (स्वर्ग) का चराहरू”)।
२)दोस्रो स्वर्ग रातमा देख्न सकिन्छ—ताराहरू, चन्द्रमा र ग्रहहरू। यो खरबौं घामहरू र आकाशमण्डलहरू भएको नक्षत्रीय ब्रह्माण्ड हो! दाऊदले भजनसंग्रह ८:३ मा दोस्रो स्वर्गको उल्लेख गरे, “जब म तपाईंको ______________ विचार गर्दछु, जो तपाईंका औंलाहरूको काम हो, अर्थात् _______ र _________, जसलाई तपाईंले नियुक्त गर्नुभयो”।
३)तेस्रो स्वर्ग विश्वासको आँखाले बाहेक अरू कुनै तरिकाले देख्न सकिँदैन। यसलाई नहेम्याह ९:६ मा “स_______ आकाश” भनिएको छ जसलाई अक्षरश: “आकाशहरूका आकाश” भनी अनुवाद गर्न सकिन्छ। लूका २:१४ मा यसलाई “प__________” भनिएको छ। आज तेस्रो आकाशलाई “स्वर्ग” (२ कोरिन्थी १२:४) पनि भनिएको छ। पावल त्यहाँ लगिएका थिए (२ कोरिन्थी १२:२)। प्रभु येशू आज त्यहाँ हुनुहुन्छ (हिब्रू ८:१; ९:२४)। परमेश्वर पिताले आफ्नो उपस्थिति प्रकट गर्नुहुने स्थान त्यहीँ हो (मत्ती ६:९) र हामी उहाँलाई ____________ पिता भनी चिन्दछौं (मत्त ६:२६)। विश्वासीको मृत्यु भएपछि ऊ त्यहीँ पुग्दछ (फिलिप्पी १:२३)। स्वर्गदूतहरूको वासस्थान पनि त्यहीँ नै हो (प्रकाश ५:११; मर्कूस १२:२५, १३:३२; लूका २:१३; मत्ती २८:२)।
उत्पत्ति १:१ (साथै प्रकाश २०:११) मा उल्लेखित “स्वर्गहरू” (हिब्रूमा वहुवचन “इम” प्रत्यय लागेको शब्द “शमाईम्” लाई “आकाशहरू” वा “स्वर्गहरू’ भनी अनुवाद गर्न सकिन्छ) ले कुनचाहिँ स्वर्गहरूलाई जनाउँछन् त?
त्यसैले, उत्पत्ति १:१ (र प्रस्थान २०:११) को “आकाशहरू” (वा स्वर्गहरू)को अर्थ __________ स्वर्ग (वायुमण्डलीय आकाश) र _____________ स्वर्ग (नक्षत्रीय ब्रह्माण्ड) को कुरा गरेको हुनुपर्छ। तेस्रो स्वर्गको सृष्टिको बारेमा उत्पत्ति १ अध्यायमा बताइएको छैन। पहिलो र दोस्रो स्वर्ग र तिनमा भएका सबै थोकहरू बनाउन परमेश्वरलाई कति समय लाग्यो (प्रस्थान २०:११)?
______________ यसको अर्थ के परमेश्वरले स्वर्गदुहरूको सृष्टि गर्नुभएन भन्ने हुन्छ? हुँदैन, बाइबलले बताउँछ कि “_______ उहाँ (सृष्टिकर्ता ख्रीष्ट) द्वारा _________ गरिएका हुन्” (कलस्सी १:१६)। नहेम्याह ९:६ मा पनि मानिसहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरे किनभने उहाँले सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो: “तपाईं, अँ, तपाईं मात्र परमप्रभु हुनुहुन्छ; तपाईंले नै आकाश, __________ ___________, त्यसको जम्मै _________ (स्वर्गदुतहरू), पृथ्वी र त्यसमाथि भएका सबै थोकहरू, समुद्रहरू र तिनमा भएका सबै थोकहरू बनाउनुभएको हो; अनि तपाईंले नै ती सबैलाई जोगाएर राख्नुहुन्छ; अनि __________ __________ (स्वर्गदुतहरूले) तपाईंलाई दण्डवत् गर्दछ।”
ध्यान दिनुहोस्, नहेम्याहले तेस्रो स्वर्ग (सर्वोच्च आकाश) को र स्वर्गदुतहरू (स्वर्गको सेना) को उल्लेख गर्दछन्। तल नहेम्याह ९:६ र प्रस्थान २०:११ बिच तुलना गरिएको छ।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/03/logo-for-website_blue-transparent_1-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/03/logo-for-website_blue-transparent_1-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 21:06:512020-04-28 14:31:42अन्तरालको सिद्धान्त
सृष्टिका छ दिन – दिनहरू थिए कि युगहरू?
सृष्टिका छ दिन — दिनहरू थिए कि युगहरू?
१) कतिको विश्वासमा उत्पत्तिको पहिलो अध्यायमा उल्लेखित दिनहरू सामान्य २४ घण्टे दिनहरू थिए। जसरी आइतवार, सोमवार, मंगलवारमा २४ घण्टा हुने गर्छ त्यसरी नै।
२) अरूहरूको विश्वासमा उत्पत्तिको पहिलो अध्यायमा उल्लेखित दिनहरू सामान्य २४ घण्टे दिनहरू नभई युगहरू थिए। उनीहरूको विश्वासअनुसार प्रत्येक “युग-दिन” (“day-age”) हजारौं वा लाखौं वर्ष लामो थियो। यसलाई “युग-दिन सिद्धान्त” (“day-age theory”) भनिन्छ।
परमेश्वर के भन्नुहुन्छ?
प्रस्थान २०:११—“किनकि _____ ________ परमप्रभुले आकाश, पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएका सबै थोकहरू ________________।”
किन केही मानिसहरूले यी ६ दिनहरू वास्तवमा युगहरू हुन् भनी विश्वास गर्छन्? विकासवादी वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि वर्तमान समयका जीवहरू (मानिस, बाँदर, जिराफ, कङ्गारु, चरा, माछा, वनस्पति र आज हामीले जानेका सबै प्राणीहरू) ४ अर्ब वर्ष लामो (पछिल्लो सिद्धान्तहरू मुताबिक यो भन्दा धेरै वा थोरै हुन पनि सक्छ) विकासवादी प्रकृयाको प्रतिफल हुन्! यो त निकै लामो समय हो! विकासवादीहरूको निम्ति प्रस्थान २०:११ यसरी लेख्न उपयुक्त होला: “किनकि ४०००,०००,००० वर्षहरूमा आकाश, पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएका सबै थोकहरू स्वत: विकास भए” प्र: ४,००,००,००,००० वर्ष बराबर कति दिन हुन्छ? एक वर्षमा कति दिन हुन्छन्? ___________ दिन
४,००,००,००,००० वर्षहरू(क्रमविकासको निम्ति आवश्यक समय) × ३६५ दिनहरू(एक वर्षमा हुने दिनको सङ्ख्या)
= १४,६०,००,००,००,००० दिन!!!
(१४ खरब ६० अरब दिनहरू!!!)
कत्रो भिन्नता! यो अचम्म र उदेकको कुरा हो कि हाम्रो महान् परमेश्वरले केवल ६ दिनमा सारा सृष्टि कार्य सम्पन्न गर्नसक्नुहुन्छ। विकासवादीहरूको ईश्वर (संजोगको ईश्वर) लाई आफ्नो कार्य समापन गर्न भने थुप्रै समय लाग्नु चाहिँ दु:खलाग्दो र दयनीय कुरा हो! तर विकासवादीहरूले पर्याप्त समय भए जुनसुकै कुरा सम्भव हुन्छ भनी विश्वास गर्दछन्! उनीहरू निम्न सरल सुत्रमा विश्वास राख्छन्:
पर्याप्त समय + पर्याप्त संजोग (ठूलै भाग्य!) = आश्चर्यजनक प्रतिफलहरू (वनस्पति, माछा, पशु, पंक्षी, मानिस आदि) के यो साँचो हुन सक्छ त?
१) मानौं तपाईंसँग एउटा बाँदर छ जसले १२ वर्ण प्रति सेकेण्डको गतिले टाइप गर्न सक्छ। उक्त बाँदरले अन्धाधुन्द टाइपराइटरमा वर्णहरू थिचिरहेको छ। उसलाई उत्पत्तिको पुस्तक (पूरै ५० अध्याय) उतार्न कति समय लाग्ला? त्यस बाँदरले दिनको २४ सै घण्टा विश्राम नगरिकन सयौं वर्षसम्म टाइप गर्यो भने तापनि, के ऊ “भाग्यशाली” भएर ती सबै शब्दहरू जस्ताको त्यस्तै उतार्न सफल होला? के उसले ५ करोड वर्षसम्म टाइप गर्ने अवसर पाएमा सफल होला?
२) उडिरहेको हवाइजहाजबाट तपाईंको नामका अक्षरहरू काठका ब्लकहरूमा लेखेर खसाल्ने कामलाई हरेक दिन ५० पटकको हिसाबमा पर्याप्त चोटि दोहोर्याइयो भने के ती ब्लकहरू भुईँमा खस्दा ठीक तपाईंकै नामलाई उतार्न सफल होलान्? _______। यदि हामीले संजोग र भाग्यमा भरोसा गर्ने हो भने, के साधारण रूपमा थोकहरूका क्रम मिल्न जाला कि बिग्रेको क्रम हुन जाला? __________________।
३) एउटा घडीका सम्पूर्ण पार्टपुर्जालाई खोलखाल गरी एउटा बाकमा राखेर उक्त बाकसलाई १० अरब वर्षसम्म हल्लाइयो भने, के ती पार्टपुर्जाहरू संजोगले मिल्न गएर एउटा काम गर्ने घडी बन्न पुग्ला? के जीवजन्तु र वनस्पतिहरू एउटा घडीभन्दा जटिल हुन्छ? ______________।
विकासवाद असम्भवझैं देखिन्छ र उक्त कार्य फेरी हुनको निम्ति ठूलै संजोग आवश्यक पर्नेछ भनी विकासवादीहरूले स्वीकार गर्दछन्, तर पर्याप्त समय भएमा, सबै कुराहरू सम्भव छ भनी तिनीहरूले दावी गर्दछन्; “ठीक अणु ठीक स्थानमा ठीक समयमा (पहिलो एककोषीय जीव उत्पादन हुनको निम्ति) हुने सम्भावना साह्रै चकित तुल्याउने कुरा हो। तरैपनि, जसरी विज्ञानले यसको नाप गर्दछ, त्यसरी नै प्रकृतिले काम गर्ने एउटा समय रेखा हुन्छ। वास्तवमा, यदि वर्णनै गर्न नसकिने युगहरू दिइएमा, एकै क्षणमा हुन असम्भव झैं देखिने थोकहरू, निश्चयतामा परिवर्तन हुन सक्छन्।”(National Geographic Magazine, September 1976, page 390)
समयसँग सबै कुराहरू सम्भव छन्! र विकासवादीहरू यो विश्वास गर्दछन् कि यस पृथ्वीमा त्यस जीवकोषलाई अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पुग्नलाई ४,०००,०००,०० वर्ष पर्याप्त समय भयो, र त्यो पनि सबै संजोगवश!
विकासवादीहरू भन्छन्: “१४,६०,००,००,००,००० दिन लाग्यो” परमेश्वरले भन्नुभयो: “६ दिन लाग्यो!”
तपाईं कसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ?
१) थोरै मानिसहरू परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्छन् र सृष्टि सम्पन्न हुन २४ घण्टा लामो ६ दिन लाग्यो भनी विश्वास गर्छन्।
२) धेरैजसो मानिसहरू विकासवादीहरूको वचन ग्रहण गर्छन् र सम्पूर्ण जीवहरू विकास हुँदै वर्तमान रूपमा आइपुग्न ४ अर्ब वर्ष लाग्यो भनी विश्वास गर्छन्।
३) केही मानिसहरू परमेश्वर र विकासवादीहरू दुवैको वचन ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्छन्। दुवै सत्य हुन् अरे। उनीहरू विश्वास गर्छन्, उत्पत्ति अध्याय १ मा उल्लेखित दिनहरू वास्तवमा दिनहरू नभएर लामो युगहरू (“युग-दिनहरू”) हुन्। उनीहरूको विश्वासमा परमेश्वरले ६ ओटा लामो युगहरूमा सबैथोकको सृष्टि गर्नुभएको हो।
प्र: यदि यो सत्य हो भने र हरेक “युग” को समयावधि बराबर थियो भने, एक “युग” ले कति समय समेट्यो त?
उ: ४,००,००,००,००० ÷ ६ “दिन” = ६६,६६,६६,६६६ वर्ष बराबर एक “युग-दिन”।
प्रत्येक “युग-दिन” को लमाइ ६६ करोड वर्ष हुने रहेछ! यो त निकै लामो “दिन” हो! के सृष्टिका दिनहरू वास्तवमै लामो समयावधिहरू थिए त? के दिनहरू साँच्ची नै युगहरू थिए त? यस प्रश्नको जवाफ दिनु अगाडी, हामीले यो बुझ्नै पर्छ कि कहिलेकाहिँ “दिन” भन्ने शब्दलाई लामो समयावधिको बयान गर्न प्रयोग गरिएको छ:
१) अहिले हामी अनुग्रहको दिनमा बाँचिरहेका छौं (२ पत्रुस ३:८-९)। निश्चय, परमेश्वरको अनुग्रह र सहनशीलताको दिन २४ घण्टा भन्दा लामो छ!
२) “परमप्रभुको दिन” (२ पत्रुस ३:१०) भन्नाले मानिसहरूको क्रियाकलापहरूमा परमेश्वरले प्रत्यक्षरूपमा हस्तक्षेप गर्नुहुने एउटा लामो समयावधि बुझिन्छ।
३) याकूबको दु:खको दिन (यर्मिया ३०:७) ले इस्राएल राष्ट्रले भोग्ने गम्भिर संकष्टको समयावधिलाई जनाउँछ। यही समयावधिलाई प्रकाश १२ मा बयान गरिएको छ। उक्त “दिन” मा कति दिन हुनेछ (पद ६)? __________। कति वर्ष (पद १४)?
(समय=१ वर्ष) + (समयहरू=२ वर्ष) + (आधा समय=१/२ वर्ष) जम्मा ____________ वर्ष
४) “दिन” लाई हामी यसरी पनि प्रयोग गर्ने गर्छौं: “हामी यस्तो
मा बाँचिरहेका छौं जहाँ मानिसहरू आफैलाई प्रेम गर्छन्, परमेश्वरलाई भन्दा पैसा र मोजमज्जालाई प्रेम गर्छन्” (२ तिमोथी ३:१-४ सित तुलना गर्नुहोस्)। यस्तो प्रकारको दिनको अवधि २४ घण्टाभन्दा लामो भइसकेको छ कि?
५) “पृथ्वीनारायण शाह मोटरगाडी, टेलिफोन, हवाइजहाज इत्यादि नभएको
मा जिउँथे। ” के अब्राहाम, मोशा, पावल पनि त्यस्तै दिनमा जिउँथे? यी उदाहरणहरूबाट हामी देख्छौं, “दिन” भन्ने शब्दलाई लामो समयावधीलाई जनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। ‘दिन” लाई १२ घण्टाको समयलाई जनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ: “आज
घाम लाग्यो!” तर प्राय: “दिन” शब्दलाई २४ घण्टाको अवधिलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ (वैज्ञानिक परिभाषाअनुसार पृथ्वीलाई आफ्नो अक्ष (axis) मा एकचोटी घुम्न लाग्ने समय)। हामी भन्छौं, “एक हप्तामा सात
हुन्छन्।” यहाँ हामी सामान्य २४ घण्टे दिनको कुरा गर्दैछौं। हाम्रो लागि महत्वपूर्ण प्रश्न यो छ: उत्पत्तिको पहिलो अध्यायमा ‘दिन’ शब्द कुन अर्थमा प्रयोग भएको छ?
सृष्टिका ६ दिनहरूमा सामन्य २४ घण्टे दिनहरू थिए भन्ने १० कारणहरू
१)“साँझ र बिहान”
परमेश्वरले होशियारपूर्वक “दिन” शब्दलाई “साँझ र बिहान” भनिने सङ्केत दिनुभएको छ। “अनि __________ पर्यो र __________ भयो — पहिलो __________” (उत्पत्ति १:५ र पद ८,१३,१९,२३,३१ हेर्नुहोस्)। प्रत्येक दिनमा हुने कुराहरू यहि हुन् – साँझ र बिहान! निम्नलिखित सङ्केतले कति दिनलाई जनाउँछ?
साँ-बि-साँ-बि-साँ-बि-साँ-बि-साँ-बि-साँ-बि ______ दिन
दानियल ८:१४ (हिब्रू प्रतिलिपि अनुसार) ले भन्दछ “दुई हजार तीन सय साँझ-बिहानहरूसम्म; त्यसपछि पवित्रस्थान शुद्ध पारिनेछ” (वा आफ्नो बाइबलको फुटनोट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ)। यो भनेको कति दिन हो? _______ दिन। दानियल ८:२६ पनि पढ्नुहोस्। प्रत्येक २४ घण्टे दिनमा एउटा साँझ र एउटा बिहान हुन्छ। के एक युगमा केवल एउटा साँझ र एउटा बिहान हुन्छ? ________। (अति लामो समयावधिमा धेरै-धेरै साँझहरू र बिहानहरू हुन्छन्!) युगको सुरु र अन्त्य होला, तर यसमा केवल एउटा साँझ र एउटा बिहान भने हुँदैन!!
परमेश्वरले “दिन” शब्दको अगाडी एउटा अङ्क राखेर त्यसलाई परिभाषित गर्नुभएको छ: “अनि साँझ पर्यो, र बिहान भयो– ________ दिन” (उत्पत्ति १:५)। त्यो कुन दिन थियो भनी परमेश्वरले तोकेर बताउनुभएको छ। त्यो पहिलो दिन थियो। हेर्नुहोस्, उत्पत्ति १:८,१३,१९,२३,३१ र प्रस्थान २०:११ (“छ दिन”)।
“दिन” शब्द अगाडि अङ्क तोकिएको खण्डमा, प्राय: त्यो एक २४ घण्टे दिनकै कुरा गरिएको हुन्छ। तुलना गर्नुहोस् गन्ती ७:१२,१८,२४,३०,३६,४२,४८ आदि। केहि उदाहरणहरूको बिचार गरौं:
३) दिन र रात
१:५ मा “पहिलो _______” मा के भएको थियो भनी परमेश्वरले हामीलाई बताउनुभएको छ। यो पहिलो दिन कस्तो प्रकारको दिन थियो? के यो एउटा युग थियो? ५ पदमा परमेश्वरले बताउनुभएको छ कि उक्त पहिलो दिनमा उज्यालोको एउटा अवधि थियो जसलाई ______ भनियो र अँध्यारोको एउटा अवधि थियो जसलाई ______ भनियो। यसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ, उक्त पहिलो दिनमा दिन र रातको एउटा अवधि थियो। सृष्टि साताको प्रथम दिन १२ घण्टा उज्यालो र १२ घण्टा अँध्यारो अवधिले बनेको थियो।
माथिको चित्रले कति दिन प्रस्तुत गर्दछ? ____________ प्रत्येक २४ घण्टे दिनमा दिन (उज्यालोको अवधि) र रात (अँध्यारोको अवधि) हुन्छ। के एक युगमा केवल एउटा दिन र एउटा रात हुन्छ? _________। (एक युगमा थुप्रै-थुप्रै दिनहरू र साँझहरू हुन्छन्!)
४) चौथो दिन
उत्पत्ति १:१५-१९ ले सृष्टिको चौथो दिनको बयान गर्दछ। यी पदहरूमा “दिन” वा “दिनहरू” ५ पटक प्रयोग भएको छ।
५) सातौं दिन
सातौं दिन पनि एक २४ घण्टे दिन थियो (उत्पत्ति २:१-३)। आदम र हव्वा कुन दिनमा सृष्टि गरिए (उत्पत्ति १:२६-३१)? _______। के आफूले आशिष दिनुभएको सातौं दिनलाई परमेश्वरले श्राप दिनुभयो (हेर्नुहोस् उत्पत्ति ३:१७-१९ र उत्पत्ति २:३)? __________। के आदम र हव्वा सातौं दिनभन्दा बढी बाँचे? ______। मृत्युमा आदमको उमेर कति थियो (उत्पत्ति ५:४-५)? __________। सातौं दिन हजारौं-लाखौं वर्षको लामो समयावधि थिएन। पहिलो ६ दिन जस्तै त्यो २४ घण्टे दिन थियो।
६) चौथो आज्ञा
चौथो आज्ञा प्रस्थान २०:८-११ मा उल्लेख गरिएको छ जहाँ “दिन” वा “दिनहरू” ६ पटक प्रयोग भएको छ। यी पदहरूमा कसरी “दिन(हरू)” भनिने शब्द प्रयोग गरिएको छ भनी हेर्न, निम्न बमोजिम जोडा मिलाउनुहोस्।
ख्याल राख्नुहोस्, प्रस्थान २०:११ मा “दिनहरू” को अगाडि _____ अङ्क राखिएको छ। तपाईंको साथीले तपाईंलाई यसो भन्लान्, “विद्यालयको एउटा कार्यपत्र बनाउन मलाई ६ दिनहरू लाग्यो!” के तपाईंको साथीले दिनहरू भनेको जस्तो लाग्छ कि युगहरू? ________ (तपाईंले विद्यालयको गृहकार्य गर्दा, युग नै बितेजस्तो लागे तापनि वास्तवमा त दिनहरू मात्र लागेका हुन्!) सृष्टिको कार्य पुरा गर्न परमेश्वरलाई कति समय लाग्यो (प्रस्थान २०:११)? __________________ तपाईंको बिचारमा के यी २४ घण्टे दिनहरू हुन्? ___________
यी पदहरूले, परमेश्वरले जसरी काम गर्नुभयो र विश्राम लिनुभयो सो इस्राएलको निम्ति एक नमूना थियो भनी बताउँछन्। परमेश्वरले इस्राएलका सन्तानहरूलाई ६ दिन (आइतवारदेखि शुक्रवार) काम गर्न र सातौं दिन (शनिवार) मा विश्राम लिने आज्ञा दिनुभयो किनकि परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुँदा ठीक त्यही समयतालिका अनुसार नै काम र विश्राम लिने कार्य गर्नुभएको थियो (प्रस्थान २०:११)।
यदि सृष्टिका दिनहरू युगहरू थिए भने, इस्रएलीहरूका काम गर्ने दिनहरू पनि युगहरू थिए भन्नुपर्ने हुन्छ। कामबाट घर फर्केका एक इस्राएलीले आफ्नो पत्नीलाई यसो भन्दै गरेको अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, “अहो! आज कति लामो दिन काम गरियो! आज म ५० करोड वर्ष काम गरेर थकित भएको छु! विश्राम दिन कहिले आउला अनि विश्राम गरूँला!”
दिनहरूलाई युगहरूको अर्थ लगाउँदा अर्थको अनर्थ हुन जान्छ! यो मूर्ख कुरा बन्दछ। निम्न बुँदामा दिनहरूले (बहुबचन) कहिल्यै पनि युगहरूको सङ्केत गर्दैन भनी हामी अध्ययन गर्नेछौं।
७) दिनहरू (बहुवचन)
प्रस्थान २०:११ मा बताइएको छ, परमप्रभुले सबथोक छ दिनमा बनाउनुभयो। हिब्रू बाइबलमा यहाँ “दिन” शब्दको बहुवचन रूप प्रयोग भएको छ। हिब्रु बाइबलमा यो बहुवचन रूप प्राय: सधैं २४ घण्टे दिनहरूलाई जनाउन प्रयोग हुन्छ। “दिन” शब्द (एकवचन) लाई २४ घण्टे भन्दा लामो समयावधिलाई जनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ: “परमप्रभुको दिन” “अनुग्रहको दिन” “सङ्कष्टको दिन” “आधुनिक विज्ञानको दिन” इत्यादि। तर जब मानिसले “दिनहरू” (बहुबचन) को कुरा गर्दछ, उसले २४ घण्टे दिनको कुरा गरिरहेको हुन्छ। निम्न उदाहरणहरूलाई बिचार गर्नुहोस्।
१. तिम्रो जन्मदिन आउन कति
२. यरिहो शहर कब्जा गर्न इस्राएलका सन्तानहरूलाई ७
लाग्यो (यहोशू ६ अध्याय पढ्नुहोस्)।
३. मर्कूस १४:१—“दुई
४. प्रकाश १२:६ (सङ्कष्टकालको पछिल्लो साँढे तीन वर्षको समयावधि)
५. प्रस्थान २०:११—६
८) “दिन” शब्दको सामान्य अर्थ
हामीले पहिले नै अध्ययन गर्यौं कि “दिन” शब्दलाई उज्यालोको १२ घण्टे समयावधि जनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ (उत्पत्ति १:५,१४,१६,१८)। “दिन” शब्दलाई लामो समयावधि जनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ (२ पत्रूस ३:८-१०; यर्मिया ३०:७)। तर प्राय: जसो जब हामीले “दिन” शब्दको प्रयोग गर्दछौं, हामीले २४ घण्टे दिनको कुरा गरिरहेका हुन्छौं। “दिन” शब्दको सामान्य र आधारभूत अर्थ यहि हो।
हामीले बाइबल अध्ययन गर्दा कुनै पनि शब्दलाई – अर्थको अनर्थ हुने परिस्थितिमा बाहेक — त्यसको अक्षरश:, सामान्य, साविक अर्थमा नै लिनुपर्छ। हाम्रो नियम यहि हो—यदि सामान्य अर्थले मुनासीब अर्थ लाग्छ भने कुनै अर्को अर्थ नखोज्नू नत्रता अर्थको अनर्थ होला। केही उदाहरणहरू:
क) “थुमा” को सामान्य अर्थ – चारखुट्टे पशु, पाठो
अ. यशैया ११:६ मा सामान्य अर्थ मुनासीब छ? ______।
आ. यूहन्ना १:२९ मा सामान्य अर्थ मुनासीब छ? ______।
ख) “कुकुर” को सामान्य अर्थ — चारखुट्टे घरपालुवा पशु
अ. लूका १६:२१ मा सामान्य अर्थ मुनासीब छ? ______।
आ. फिलिप्पी ३:२ र प्रकाश २२:१५ मा सामान्य अर्थ मुनासीब छ? ______।
ग) “रगत” को सामान्य अर्थ – रक्तनलीमा हुने रातो तरल पद्धार्थ
अ. यूहन्ना १९:३४ मा सामान्य अर्थ मुनासीब छ? ______।
आ. मत्ती २६:२८ मा सामान्य अर्थ मुनासीब छ? ______।
टिप्पणी: रोमन क्याथोलिक्सहरूले यस पदलाई गलत ढङ्गले बूझ्दछन् किनभने “रगत” लाई उनीहरूले सामान्य अर्थमा बुझ्दैनन्, र त्यसैले जब उनीहरूले म्यास (MASS) लिँदछन्, अङ्गुरको रस ख्रीष्टको वास्तविक रगत बन्दछ भनी उनीहरू विश्वास गर्दछन्। यूहन्ना ६:५४ लाई यूहन्ना ६:४० सित तुलना गर्नुहोस् जहाँ हामी देख्दछौं कि विश्वास गर्नु भनेकै उहाँको मासु खानु र रगत पिउनु हो।
सृष्टिका दिनहरूलाई सामान्य अर्थमा अक्षरश: २४ घण्टे दिनहरूको रूपमा लिन मिल्छ? यसले मुनासिब अर्थ दिन्छ कि अनर्थ हुन्छ? निम्न प्रश्नहरूलाई विचार गर्नुहोस्:
(१) के सर्वशक्तिमान परमेश्वरले ६ ओटा अक्षरश: दिनहरूमा सृष्टि गर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ? के परमप्रभुको निम्ति कुनै कुरा औधी कठीन छ (उत्पत्ति १८:१४)?
(२) के परमेश्वरले चाहनुभएको भए उक्त कार्य एकै दिनमा गर्नसक्नुहुन्थ्यो? एकै सेकेण्डमा?
(३) परमेश्वरले किन ६ दिन लगाएर सो गर्नुभयो (प्रस्थान २०:११)?
(४) के परमेश्वरलाई सृष्टिको काम सम्पन्न गर्नलाई करोडौं वर्षको आवश्यकता थियो?
(५) सृष्टिका दिनहरूलाई युगहरूको अर्थ लगाउँदा मुनासिब अर्थ लाग्छ?
कतिपय मानिसहरूलाई सृष्टिका छ दिनलाई लामो युगहरूको अर्थ लगाउनु पर्ने बाध्यता हुनुको एउटै मात्र कारण छ: विकासवादीहरूको “ईश्वर” लाई काम गर्ने पर्याप्त समय दिन। संजोगको ईश्वरलाई थुप्रै समयको आवश्यकता पर्छ! उसले छ दिनमा कार्य सम्पन्न गर्नु एक असम्भाव्य कुरो थियो! वास्तवमा उसले त्यो ६,००,००,००,००,००,००० दिनमा सम्पन्न गर्न सक्थ्यो भन्ने कुरामा पनि शंकै छ!
९) मोशाको बुझाइ के थियो?
उत्पत्तिको पुस्तक लेखाउन परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको व्यक्ति मोशा थिए (लूका २४:२७,४४)। बाइबल अध्ययन गर्दा तपाईंले आफूलाई सधैं यो महत्त्वपूर्ण एउटा प्रश्न सोध्ने गर्नुपर्छ: मूल लेखक (हाम्रो सन्दर्भमा मोशा) र मूल श्रोताहरू (इस्राएलीहरू) ले लेखिएको वचनलाई कसरी बुझ्थे?
के तपाईंलाई, मोशाले सृष्टिका दिनहरूलाई युगहरूको अर्थमा बुझ्थे भन्ने लाग्छ? के मोशाका समकालीन मानिसहरूले ती दिनहरूलाई २४ घण्टे दिनहरूको अर्थमा बुझ्थे? के तिनीहरूलाई ती दिनहरूलाई युगहरूको अर्थमा सोच्नुपर्ने कुनै कारण थियो?
मोशा लगायत त्यसबेलाका मानिसहरूले यो विश्वास गर्थे, परमेश्वरले सृष्टिको कार्य आइतबार सुरु गर्नुभयो, मानिसलाई शुक्रबारमा सृष्टि गर्नुभयो अनि शनिबार विश्राम गर्नुभयो। के तपाईं मोशाले जस्तै विश्वास गर्नुहुन्छ?
१०) रोज्नुहोस्: उत्पत्तिको पुस्तक कि विकासवाद?
कतिपय मानिसहरूको सोचाइमा सृष्टिका दिनहरूलाई युगहरूको अर्थमा लिएको खण्डमा उत्पत्तिको पहिलो अध्यायले विकासवादकै सिद्धान्त सिकाउँछ। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि उत्पत्तिको पहिलो अध्यायमा उल्लेखित घटनाक्रम विकासवादीहरूकै प्रस्तावित घटनाक्रमसित मेल खान्छ। हेरौं, यो साँचो हो कि होइन:
(१) विकासवादअनुसार पृथ्वी अगाडि सूर्य थियो।
तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, सूर्य ________ दिनमा र पृथ्वी __________ दिनमा सृष्टि गरिएका थिए। तसर्थ पृथ्वी सूर्यभन्दा ________ दिन पुरानो छ! के सूर्यको सृष्टि हुनुभन्दा पनि अगाडि त्यहाँ प्रकाश थियो? ________। प्रकाशको सृष्टि कुन दिनमा भएको हो? __________ दिन।
(२) विकासवादअनुसार जीवको सुरुआत समुद्रबाट भएको हुनुपर्छ। करोडौं वर्ष बितेपछि कतिपय जीवहरू जमीनमा सरे।
तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, समुद्रमा जीवहरू __________ दिनमा र जमीनमा जीवहरू __________ दिन (वनस्पति) मा देखा परेका हुन्। तसर्थ समुद्रमा जीवहरू देखापर्नु भन्दा ________ दिन अगाडि जमीनमा जीवहरू देखा परेका हुन्।
(३) विकासवादअनुसार पंक्षी अगाडि रेप्टाइल (घस्रने पशु) हरू आए (कारण पंक्षीहरू रेप्टाइलहरूबाट विकास भएका हुन् भन्ने उनीहरूको विश्वास छ)।
तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, पंक्षीहरू ________ दिनमा र स्थलजन्तुहरू (यसर्थ रेप्टाइलहरू पनि) ________ दिनमा मात्रै सृष्टि भएका हुन्। पंक्षीहरू रेप्टाइलहरूभन्दा ______ दिन पुराना हुन्! के पंक्षीहरू रेप्टाइलहरूबाट विकास हुन सम्भव थियो? ________। निश्चय पनि रेप्टाइलहरू पंक्षीहरूबाट विकास भएनन् (विकासवादीहरूले समेत यो मान्दैनन्!)। बाइबलले भन्छ, परमेश्वरले नै पंक्षीहरू र रेप्टाइलहरू सृष्टि गर्नुभयो। रेप्टाइलहरू पंक्षीहरूभन्दा लाखौं वर्ष अगाडिका होइनन्।
(४) विकासवादअनुसार जमीनका स्तनधारी प्राणीहरू व्हेलहरूभन्दा अगाडि आए (किनभने तिनीहरू विश्वास गर्दछन् कि व्हेलहरू जमीनका स्तनधारी प्राणीहरूबाटा विकास भएका हुन्)।
तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, व्हेलहरू र समुद्रका अरू विशाल जलचरहरू __________ दिनमा र जमीनका स्तनधारी प्राणीहरू _________ दिनमा मात्रै सृष्टि भएका हुन्। कुन पहिला आएको हो, व्हेल कि सुङ्गुर? _____________ के व्हेल सुङ्गुरझैं देखिने प्राणीबाट बिकास भएर आएका हुन्? _________ त्यसैले व्हेलहरू जमीनका स्तनधारी प्राणीहरूभन्दा _______ दिन पुराना हुन्! जमीनका स्तनधारी प्राणीलाई व्हेल बन्नको निम्ति ऊ फेरी पानीमा फर्किनुपर्छ, उसको रौंहरू बिलाउनुपर्छ र आफ्नो वास्तविक भन्दा ५० गुणा बेसी ठूलो आकार लिनुपर्छ! के यो साँच्चै हुन सक्छ होला? _______ ठूलो हात्तीको (जमीनका सबैभन्दा ठूलो स्तनधारी प्राणी) तौल लगभग ७ हजार किलो हुन्छ! ब्लू व्हेलको (blue whale) (व्हेलको सबैभन्दा ठूलो प्रजाती) तौल लगभग १५० हजार किलो हुन्छ! व्हेल संजोगले विकास भएको होइन, यो त परमेश्वरको सृष्टि हो!
(५) विकासवादअनुसार किराफटेङ्ग्राबिना वनस्पति जीव हुन सक्दैन किनकि वनस्पतिको प्रजनन प्रकृयाको निम्ति मौरी जस्ता किराहरूको आवश्यकता पर्छ।
तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, किराफटेङ्ग्राहरू (घस्रिने जन्तुहरू पनि) _________ दिनमा सृष्टि गरिएका हुन् र वनस्पतिहरू __________ दिनमा सृजिएका हुन्। यसको अर्थ वनस्पतिहरू किराफटेङ्ग्राहरू भन्दा _______ दिन पुराना हुन्! किराफटेङ्ग्राहरू बिना बिरुवा र वनस्पतिहरू के ३ युगसम्म बाँच्न सक्लान्? ___________ बिरुवा र वनस्पतिहरू बिना किराफटेङ्ग्राहरू के ३ युगसम्म बाँच्न सक्लान्? ___________
(६) विकासवादअनुसार बाँदरजस्ता प्राणीहरू मानिसभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि आए (किनकि उनीहरूको विश्वासमा मानिस बाँदरजस्ता प्राणीबाट विकास भएका हुन्)।
तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि दुवै मानिस र बाँदरहरू _________ दिनमा सृष्टि गरिएका हुन्।
(७) विकासवादअनुसार जीवहरूको सुरुआत हुनु अगाडि सूर्य हुनैपर्छ (किनकि उनीहरूको विश्वासमा जीवहरूको सुरुआत प्राचीन समुद्रहरूमा सूर्यको किरणहरू परेर भएको थियो)।
तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि जीवन (वनस्तपति) __________ दिनमा सृजिए र सूर्य _________ दिनमा मात्र बनाइयो। सूर्यबिना जीवन सुरु हुन सम्भव छ तर के सृष्टिकर्ताबिना जीवन सुरु हुन सक्छ? ________ जीवनको स्रोत को हुनुहुन्छ (प्रेरित १७:२८ पढ्नुहोस्)? _________ जीवनले आफ्नो अस्तित्वको श्रेय सूर्यलाई होइन तर परमेश्वरको पुत्रलाई दिनुपर्छ (यूहन्ना १:३ र कलस्सी १:१६ हेर्नुहोस्)।
कुन दिनमा निम्न कुराहरू सृष्टि भएका हुन् भनी लेख्नुहोस।
परमेश्वरको वचन र विकासवादीहरूका सिद्धान्त, दुवैलाई नै मान्न सकिन्न! यी दुईले एउटै कुरा सिकाइरहेका छैनन्! यदि उत्पत्तिको पहिलो अध्याय साँचो हो भने (अनि यो हो पनि!), विकासवाद झूटो हुनुपर्छ। यदि विकासवाद साँचो हो भने, उत्पत्तिको पहिलो अध्याय झूटो हुनुपर्छ, बाइबल त्रुटिहरूले भरिएको हुनुपर्छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि परमेश्वरको वचन ________ (यूहन्ना १७:१७) छ अनि हामी जान्दछौं कि परमेश्वरको वचन __________ नै ________ छन् (भजनसंग्रह ११९:१६०)। तपाईंले कसलाई विश्वास गर्नुपर्छ—सृष्टिकर्तालाई कि विकासवादीहरूलाई? तपाईं आफ्नो विश्वास कसमाथि राख्नुहुन्छ—आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न अरबौं वर्ष लगाउने विकासवादीहरूको झुटो ईश्वरमाथि कि सबथोक ६ दिनमा सृष्टि गर्न सक्नुहुने सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्तामाथि?
यस जगतको अवलोकन र अध्ययन गर्ने क्रममा तपाईंले यो पत्ता लगाउनुहुनेछ कि विज्ञानका सम्पूर्ण सत्य-तथ्यहरू र विज्ञानका सम्पूर्ण सत्य नियमहरू बाइबल र उत्पत्तिको पहिलो अध्यायसित ठ्याम्मै मेल खान्छन्! के तपाईंलाई, परमेश्वरले दिनुभएको पहिलो पुस्तक (सृष्टिमा दिइएको परमेश्वरको प्रकाश) ले दोस्रो पुस्तक (उहाँको वचनमा दिइएको परमेश्वरको प्रकाश) को खण्डन गर्न सम्भव छ भन्ने लाग्छ? ____________। पहिलो पुस्तक कसले लेखे? ______________। दोस्रो पुस्तक कसले लेखे? _______________। परमेश्वर नै दुवैका लेखक हुनुहुन्छ! त्यसैले नै दुवै पुस्तक मेल खान्छन्। अनि दुवै पुस्तकले सृ____________को महानतालाई औंल्याउँछन् जो सदासर्वदा धन्यको हुनुहुन्छ (रोमी १:२५)। खेदको कुरा, विकासवादीहरूका पुस्तकहरू विज्ञानका सत्य-तथ्यहरूसित प्राय: मेल खाँदैनन्, तिनीहरू परमेश्वरको वचन बाइबलसित त निश्चय मेल खाँदैनन्। आजै रोज्नुहोस्! (यहोशू २४:१५ मा हेर्नुहोस्)। कि त सृष्टिका साँचो परमेश्वरलाई रोज्नुहोस्, कि त विकासवादीहरूको झूटो ईश्वर (संजोगको ईश्वर) लाई रोज्नुहोस्!
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/03/logo-for-website_blue-transparent_1-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/03/logo-for-website_blue-transparent_1-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 20:44:542020-04-28 14:31:42सृष्टिका छ दिन – दिनहरू थिए कि युगहरू?
विश्वासयोग्य—तपाईंले सृष्टिकर्तामाथि भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ! उहाँले कहिल्यै झूट बोल्नुहुन्न (तीतस १:२)। उहाँ कहिल्यै गलत हुनुहुन्न! वैज्ञानिकहरू प्राय: जसो गलत हुन्छन्। एकताका पृथ्वी समतल छ भनी वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्दथे! एक समय उनीहरूले पृथ्वी पुरै सौर्य प्रणालीको केन्द्र हो भनी विश्वास गर्दथे! आज पनि वैज्ञानिकहरूका पुस्तकहरूमा दिनहुँ जसो परिवर्तनहरू र समावेशहरू (updates) गरिनुपर्छ। सृष्टिकर्ताको पुस्तक कहिल्यै पनि परिवर्तन गरिनुपर्दैन र यो जहिल्यै पनि पूर्ण हुन्छ! सृष्टिकर्ताले सँधै सत्य बोल्नुहुन्छ! उहाँले कहिल्यै पनि हामीलाई मूर्ख बनाउने र झुक्काउने प्रयास गर्नुहुँदैन! हामी जहिल्यै पनि उहाँको वचनलाई भरोसा गर्न सक्छौं। येशू ख्रीष्ट धोकेबाज हुनुहुँन्न! अनि येशू ख्रीष्ट विकासवादी पनि हुनुहुँन्न (मत्ती १९:४)। वास्तवमा, येशू ख्रीष्ट स्वयं सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ (कलस्सी १:१६)!! यो दु:खको कुरा हो, तर सत्य हो, प्राय: वैज्ञानिकहरू विकासवादी छन् (उनीहरू विकासवादमा विश्वास राख्छन्)। तुलनात्मक हिसाबले निकै थोरै वैज्ञानिकहरू मात्र सृष्टिवादी छन् (जसले सृष्टिमा विश्वास राख्छन्)। तर यो पनि सत्य कुरा हो,
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/03/logo-for-website_blue-transparent_1-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/03/logo-for-website_blue-transparent_1-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 20:41:132020-04-28 14:31:42सृष्टिलाई बुझ्ने कसरी?
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/03/logo-for-website_blue-transparent_1-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/03/logo-for-website_blue-transparent_1-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 20:36:502020-04-28 14:31:41सृष्टिकर्ताका दुई पुस्तकहरू
सत्य परमेश्‍वरलाई जनाउन एलोहीम प्रयोग गरिँदा (जस्तै उत्पत्ति १:१ मा) यसलाई नेपालीमा “परमेश्‍वर” भनी रूपान्तर गरिएको छ। तर “ऐलोहीम” एउटा बहुवचन शब्द हो! त्यसो भए उत्पत्ति १:१ लाई नेपालीमा “आदिमा परमेश्‍वरहरूले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो” भनेर लेखिनुपर्ने थिएन त? परमेश्‍वर कतिओटा हुनुहुन्छ (१ कोरिन्थी ८:५-६; मर्कूस १२:२९-३०; व्यवस्था ४:३९; यशैया ४४:६-८; ४५:५-६)? ________। के संसार तीनओटा परमेश्वरहरूद्वारा सृष्टि गरिएको हो? ______।
उत्पत्ति १:१ को “सृष्टि गर्नुभयो” भन्ने क्रियापद एकवचन क्रियापद हो अनि यसलाई“उहाँले सृष्टि गर्नुभयो” भनी अनुवाद गर्न सकिन्छ। त्यसैले, “आकाश र पृथ्वी कसले सृष्टि गर्नुभयो?” भन्ने प्रश्‍नको जवाफ दुइटा छ:
उहाँले गर्नुभयो (एकवचन) किनकि त्यो क्रियापदको अर्थ “उहाँहरूले” नभएर “उहाँले सृष्टि गर्नुभयो” भन्ने हुन्छ।
परमेश्‍वरले गर्नुभयो (बहुवचन) किनकि एलोहीम एक बहुवचन शब्द हो।
त्यसैले संसार सृष्टि गर्नुहुने दुवै एकवचन अनि बहुवचन पनि हुनुहुन्छ! उहाँ एक हुनुहुन्छ तर उहाँ एकभन्दा धेरै पनि हुनुहुन्छ! उहाँ “बहु-एक” हुनुहुन्छ! ब्यवस्था ६:४—“हे इस्राएल सुन, ___________ (एकवचन) हाम्रा ___________ (एलोहीम-बहुवचन) एउटै __________ (बहु-एकवचन) हुनुहुन्छ”। हाम्रो परमेश्‍वर एउटै परमप्रभु हुनुभएको हुनाले, हामीले उहाँलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छौं (ब्यवस्था ६:५)? ____________________________________________________________________ । यदि त्यहाँ दुई परमेश्‍वरहरू हुनुभएको भए, के हामीले दुवैलाई त्यसरी प्रेम गर्न सक्नेथ्यौं होला (लूका १६:१३)? ______________। उत्पत्ति १:२६-२७ मा पनि परमेश्‍वरको “बहु-एकता” देख्छौं। पद २६ ले परमेश्‍वर “बहु” हुनुहुन्छ भनी देखाउँछ। पद २७ ले परमेश्‍वर एउटै हुनुहुन्छ भनी देखाउँछ।
उत्पत्ति १:२६ (बहुवचन)
“अनि _________ (एलोहीम) ले भन्नुभयो, ‘हामी मानिसलाई ______ स्वरूपमा, _______ समानतामा बनाऔं’ (उत्पत्ति ३:२२; ११:७; यशैया ६:८)।
उत्पत्ति १:२७ (एकवचन)
“अनि परमेश्‍वरले मानिसलाई _______ स्वरूपमा _______ ___________ (एकवचन क्रियापद – उहाँले सृष्टि गर्नुभयो) , उहँले तिनलाई परमेश्‍वरको स्वरुपमा _______ ___________। उहँले तिनीहरूलाई नर र नारी गरेर _______ ______________।”
सृष्टिकर्ता कसरी “बहु” पनि “एक” पनि हुन सम्भव छ? सृष्टिकर्ता कसरी “बहु-एक” हुन सम्भव छ? यसको जवाफ नयाँ नियममा छ जहाँ हामी पाउँछौं कि एउटै परमेश्‍वर तीन व्यक्तिहरूमा हुनुहुन्छ।
तीन व्यक्तिहरू तर एउटै परमेश्‍वर
मत्ती २८:१९ २ कोरिन्थी १३:१४
१) ______________________ १) ______________________
२) ______________________ २) ______________________
३) ______________________ ३) ______________________
यस सत्यतालाई परमेश्वरको त्रिएकता भनिन्छ:
यो बुझ्नलाई यसरी विचार गर्न सकिन्छ: पानी ३ भिन्न रूपहरूमा पाइन्छ (१‍‍‌‌‍‍‍. बरफ २. तरल ३. बाफ) तरैपनि प्रत्येक रूप पानी नै हो र प्रत्येक नै एउटै तत्व (H2O) ले बनेको हुन्छ। अब, परमेश्‍वर ३ भिन्न व्यक्तिहरू (१. पि__ २. पु__ ३. प____ आ____) मा हुनुहुन्छ तरैपनि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ र प्रत्येकमा एउटै तत्व समानरूपमा छ। परमेश्‍वर आफैंमा जे-जस्तो हुनुहुन्छ त्यसलाई परमेश्‍वरको तत्वभनिन्छ। परमेश्‍वर…हुनुहुन्छ:
सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी बुद्धिमान पवित्र
सर्वव्यापी अपरिवर्तनीय विश्‍वासयोग्य धर्मी
सत्य अनन्त प्रेम सार्वभौम
र, परमेश्‍वर यी सबै गुणहरू वा चरित्रहरू भन्दा पनि अझै बढी हुनुहुन्छ!
सृष्टिको अध्ययन गर्ने क्रममा, सृष्टि गर्ने कार्यमा त्रिएक परमेश्‍वरका तीनओटै व्यक्तिहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो भन्ने सिक्छौं:
१. सृष्टि गर्ने कार्यमा पिता परमेश्‍वर संलग्न हुनुहुन्थ्यो
एफेसी ३:९—“परमेश्‍वर (परमेश्‍वर पिता) ले येशू ख्रीष्टद्वारा ____ ____________ ______ गर्नुभयो” (हिब्रू १:२ मा पनि हेर्नुहोस्)।
२. सृष्टि गर्ने कार्यमा पुत्र परमेश्‍वर संलग्न हुनुहुन्थ्यो
सृष्टि गर्ने कार्यको प्रमुख कर्ता पुत्र परमेश्‍वर हुनुहुन्थ्यो! सृष्टि गर्ने कार्य वास्तवमा उहाँले गर्नुभयो! येशू ख्रीष्ट नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ!
कलस्सी १:१६—“______ ______ (परमेश्‍वरको पुत्र, पद १३ हेर्नुहोस्) द्वारा नै _______ गरिएका हुन्; सबै कुराहरू ________ र उहाँकै निम्ति ______ __________ ______।”
यूहन्ना १:३—“_____ ___________ ______ (वचन, पद १४ मा हेर्नुहोस्) द्वारा __________, अनि हुनआएका कुराहरूमध्ये कुनै पनि उहाँबिना हुनआएन।” पुत्र परमेश्‍वरबिना कति थोकहरू बनिए? ________________________।
हिब्रू १:२—“(परमेश्‍वर पिता) यी अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ हामीसँग आफ्ना ______द्वारा बोल्नुभएको छ; जसलाई उहाँले सबै कुराहरूको हकवाला नियुक्त गर्नुभएको छ, जसद्वारा उहाँले संसारहरू (युगहरू) पनि ______________।”
एफेसी ३:९—“परमेश्‍वर (पिता) ले ______ _______द्वारा सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो।”
३. सृष्टि गर्ने कार्यमा पवित्र आत्मा परमेश्‍वर संलग्न हुनुहुन्थ्यो
उत्पत्ति १:२—“अनि ____________ _______ पानीको सतहमाथि घुम्नुहुन्थ्यो।”
अय्युब २६:१३—“आफ्नो आत्माद्वारा उहाँले आकाश सिंगार्नुभएको छ।” “सिंगार्नु” को अर्थ हो, “सुन्दर बनाउनु।” यस पदले बताउँछ, सृष्टिको कार्यमा पवित्र आत्मा चाहिँ ईश्‍वरीय चित्रकार हुनुहुन्छ। पृथ्वी “आकारविनाको र शून्य” भएको समयमा परमेश्‍वरको आत्मा क्रियाशील बन्नुभयो र नवसृजित पृथ्वीलाई ढाल्न, सुन्दर बनाउन र त्यसलाई जीवन दिने कार्य गर्न थाल्नुभयो (उत्पत्ति १:२)!
त्रिएक परमेश्‍वर सृष्टि गर्ने कार्यमा मात्र नभएर नयाँ सृष्टि गर्ने कार्यमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो (२ कोरिन्थी ५:१७; एफेसी २:१०), अर्थात् उद्धारको कार्यमा!
त्रिएक परमेश्‍वर र हाम्रो उद्धार:
यूहन्ना ३:१६ लाई यूहन्ना ३:५ सित तुलना गर्नुहोस्। पिता चाहिँ दाता हुनुहुन्छ, पुत्र चाहिँदान हुनुहुन्छ र विश्‍वास गर्ने पापीको उक्त दानको प्राप्त गराइलाई पक्का गरिदिनुहुनेचाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ!
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/03/logo-for-website_blue-transparent_1-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/03/logo-for-website_blue-transparent_1-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 20:19:592020-04-28 14:31:42१-सृष्टिकर्ता (ख)
“‍शुरुमा ______________ले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो” (उत्पत्ति १:१)। यस पदअनुसार, सृष्टिकर्ता को हुनुहुन्थ्यो? ______________। यहाँ हिब्रू शब्द “एलोहीम” लाई “परमेश्वर” भनी अनुवाद गरिएको छ। “एलोहीम” को “ईम” प्रत्ययले हिब्रू भाषामा बहुवचनको संकेत दिन्छ। नेपाली भाषामा बहुवचन जनाउन “हरू” प्रत्यय लगाइन्छ। निम्न शब्दहरूलाई बहुवचन बनाउनुहोस्:
१) कुकुर____ ४) हजुरआमा____
२) कलम____ ५) ईश्‍वर____
३) खरबुजा____ ६) चरा___
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/03/logo-for-website_blue-transparent_1-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/03/logo-for-website_blue-transparent_1-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 20:18:482020-04-28 14:31:41१-सृष्टिकर्ता (क)